तथ्यांकोवाच : मोबाइल फोन आयात | गृहपृष्ठ
Home अंक समाचार तथ्यांकोवाच : मोबाइल फोन आयात
on: March 24, 2019 अंक समाचार, लगानी
काठमाडौं (अस) । नेपालमा आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूमध्ये मोबाइल फोन वा सेलुलर फोन पनि पर्छ । ताररहित सञ्चार सञ्जालको प्रयोगसँगै मोबाइल फोनको प्रयोग र यसको माग विगत केही वर्षदेखि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसको आयातको अवस्था कस्तो छ । विगत ५ वर्षदेखिको आयात प्रवृत्तिलाई भन्सार विभागको प्रकाशित तथ्यांकमा आधारित भएर प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ मोबाइल फोनको आयात रू. १० अर्ब ८० करोड मूल्यको भएकोमा आव २०७१/७२ मा रू. ११ अर्ब ७८ करोड मूल्यको आयात भएको थियो ।
यसपछिका वर्षमा आयात अझ बढेको छ । आव २०७२/७३ मा रू. १८ अर्ब २१ करोड र आव २०७३/७४ मा रू. २२ अर्ब ६६ करोडको मोबाइल फोनको आयात भएको छ । त्यस्तै, आव २०७४/७५ मा रू. २४ अर्ब ८८ करोडको आयात भएको छ । चालू आवको प्रथम ६ महीनामा रू. ९ अर्ब ६१ करोडको आयात भएको छ । तथ्यांकअनुसार मोबाइल फोनको आयात वर्षेनि बढिरहेको देखिन्छ ।
तथ्यांकले आयात परिमाणमा पनि क्रमशः वृद्धि भएको देखाउँछ । आव २०७०/७१ मा ३१ लाख ७२ हजार थान मोबाइल फोनको आयात भएको थियो भने आव २०७४/७५ मा ६२ लाख २४ हजार थान आयात भएको थियो । चालू आव २०७५/७६ को प्रथम ६ महीनामा २१ लाख ९२ हजार थान मोबाइल फोनको आयात भइसकेको छ ।
देशगत आधारमा विगत ५ वर्षमा चीनबाट सबैभन्दा धेरै मोबाइल फोनको आयात भएको छ । गतवर्ष (आव २०७४/७५) मा चीनबाट रू. १९ अर्ब ७२ करोडको मोबाइल फोन आयात भएको थियो । यो मोबाइल फोनको कुल आयातको ७९.२७ प्रतिशत हो ।
दोस्रोमा भियतनामबाट रू. २४ अर्ब ८८ करोडको आयात (१८.२७ प्रतिशत अंश) भएको थियो । शुरूतिर तेस्रो स्थानमा हङकङ र चौथोमा दक्षिण कोरिया थिए भने पछिल्ला वर्षहरूमा तेस्रो स्थानमा भारत (गतवर्ष १.५७ प्रतिशत अंश) छ । यद्यपि, चीनको तुलनामा भारत, हङकङ अथवा कोरियाबाट हुने आयात नगण्यजस्तै छ ।
के नेपालबाट मोबाइल फोन विदेशमा निर्यात हुन्छ ?
तथ्यांकले देखाएअनुसार आव २०७२/७३ मा नेपालबाट हङकङतर्फ रू. ३ करोड ७ लाखको ३ हजार १ सय ७५ थान तथा आव २०७४/७५ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सतर्फ रू. ५८ करोड ८३ लाखको ७४ हजार ८ सय ८८ थान मोबाइल फोन निर्यात भएको थियो ।